अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनका कारण देउवा भारतसँग मिल्न बाध्य छन्ः विप्लव » खबरहरुको एउटै केन्द्र
अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनका कारण देउवा भारतसँग मिल्न बाध्य छन्ः विप्लव
बिहीबार, भाद्र १, २०७४ ००:४८ मा प्रकाशित !
हामी एक स्तरको लडाईबाट पूरा गरेर यहाँ आइपुगेका छौं । चुनाव खारेज अभियानमा क्षति कुन स्तरको हुन्छ र उपलब्धी हुन्छ भन्ने सोचिएकै थियो । चुनाव खारेजी अभियान रगतले लत्पतिएको छ । रगत, हिरासत र जेलले भरिएको छ । एक जना केन्द्रीय सदस्यसहित केही साथीहरू अझै जेलमा छन् । हरेकले आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि मूल्य चुकाउनु पर्दछ । यो प्रशिक्षण कक्ष यातना, बलिदान र कष्ट झेलेर आएका क्रान्तिकारीहरूले भरिएको छ । मोर्चामा खट्नेहरू मात्र क्रान्तिकारी हुन् । क्रान्तिकारीहरु अहिले खडा भएका छौं ।
केही व्यक्तिहरूले धादिङ बैठकमै चुनावमा जानुपर्छ भनेका थिए । हामीले उनीहरूलाई चुनावमा जाने भए जिम्मेवारी छोड्न आग्रह गरेका थियौं । संसदीय चुनावमा सहभागी हुने भनेको जनयुद्धलाई प्रचण्ड–बाबुरामले भनेझैं विसर्जन गर्ने कुरा हो । उपयोग भन्दै आफंै उपयोग हुने र आन्दोलनलाई समाप्त बनाउने कुरा हो । चुनावलाई कार्यनीति भन्दै संसदवादतिर नै जानु हो । संसदीय व्यवस्थाको सुविधा र पद लिंदै उसलाई गाली गरेर बस्नु भनेको संसदवाद हो । त्यसकारण उपयोग होइन, आज संसदवादलाई चोकमा उभ्याएर धज्जी उडाउनुपर्छ । ध्वस्त बनाई दिनुपर्छ । निरङ्कुश राजतन्त्र वा सैनिक शासनमा उपयोगको नीति आवश्यक हुन सक्छ । नेपालको अहिलेको स्थिति रुसको सन् १९०५ को जस्तो पनि होइन । न त नेपालको २०४७/०४८ सालको जस्तो हो । हामी अगाडि बढ्न गोडा कमाएको भए थुप्रै अवसरवादीहरूले हाम्रो प्रशंसाको गीत गाएका हुन्थे । हामीले गोडा कमाएनौं । दह्रोसित उभियौं ।
PREVIOUS POST Previous post: पत्रकार महासंघमा मगर बागी उम्मेदवार
NEXT POST Next post: हवल्दारको सरुवामा समेत गृहमन्त्रीको हस्तक्षेप
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, भाद्र १, २०७४ ००:४८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, भाद्र १, २०७४ ००:४८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, भाद्र १, २०७४ ००:४८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, भाद्र १, २०७४ ००:४८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, भाद्र १, २०७४ ००:४८